मनीषाको दाम्पत्य जीवन धरापमा ? | अग्निबाँण, समाचार र बिचारको अग्नि
← यसरी मारे माओवादीले मुक्तिलाई	नेपालसम्बन्धी अमेरिकी दूतावासको हजारौँ गोप्य कागजात सार्वजनिक हुँदै →	मनीषाको दाम्पत्य जीवन धरापमा ?	27
गत शुक्रबार फेसबुकमा आफ्नो वैवाहिक जीवनमा समस्यामा परेको स्टाटस मेटाए पनि उनीहरूको पारिवारिक समस्यामा भने सुधार नआएको उनीहरूको व्यवहारले दे खाएको छ। दसैंमा माइती आएपछि मनीषा बुढानीलकण्ठस्थित आफ्नो घरमा एकपटक मात्र पुगेकी थिइन्। ‘माइतीमा बस्नु नराम्रो होइन, तर र्फकंदा उनले बुढानीलकण्ठमा भएका आफ्ना सबैजसो सामग्री माइतीमा ल्याएकी थिइन्।’ पारिवारिक स्रोतले साप्ताहिकसँग भन्यो, ‘सबै सामग्रीसहित माइती आउनुचाहिँ केही असजिलो दृश्य थियो।’ त्यसबेला उनका नजिकका आफन्तले उनी लामो समय माइतीमै बस्ने हिसाबले आएको अनुमान गरेका थिए।
एक दशकभन्दा बढी समय हिन्दी चलचित्र उद्योगमा अभिनेत्रीका रूपमा माथिल्लो पोजिसन प्राप्त गरेकी अनि ५ महिनाअघि विवाह गरेकी मनीषा कोइरालाको वैवाहिक जीवन अप्ठयारो अवस्थामा पुगेको बताइन्छ । लाखौं खर्च गरेर तामझामका साथ गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टमा भएको विवाहमा सरिक हुन बलिउडका चर्चित हस्तीहरू नेपाल आएका थिए । त्यसबेला मनीषा आफैंले विवाहलाई सम्झनायोग्य बनाउने भन्दै सोल्टी क्राउन प्लाजामा सबै राजनीतिक दलका नेता एवं नेपालका सबैजसो विशिष्ट व्यक्तिलाई पाँचतारे पार्टी दिएकी थिइन् । उनको विवाहको पार्टीमै करिब ४० लाख खर्च भएको थियो ।
५ महिना लामो चिनजान र प्रेमपछि भएको उक्त विवाहका विषयमा मनीषाले त्यसबेला साप्ताहिकसँग भनेकी थिइन्, ‘सम्राट मेरो संसार हो । ऊजस्तो श्रीमान् पाएर म धन्य भएकी छु ।’ अहिले तिनै मनीषाले आफ्नो विवाहप्रतिको धारणा परिवर्तन गरेकी छिन् । चर्चित सोसियल नेटवर्किङ साइट फेसबुकमार्फत उनले आफ्नो विवाहसम्बन्धी धारणा परिवर्तन भएको बताएकी हुन् । त्यतिमात्र होइन, उनले आफ्नो वैवाहिक जीवनको विकल्प पनि सोच्न थालेको कुरा सार्वजनिक गरेकी छिन् । गत शुक्रबार पोस्ट गरिएको उक्त स्टेटसमा आफ्नो जीवनमा केही प्रश्न गम्भीर रहेको बताउँदै आफ्नो पीडा अरूलाई भन्न नसक्ने अवस्थाको चित्रण गरेकी छिन् । विरक्तिएको तर अस्पष्ट अंग्रेजी भाषामा लेखिएको उक्त स्टेटस अचानक हजारौं व्यक्तिमाझ पुगेपछि पक्ष-विपक्षमा सयौं कमेन्ट आए ।
मनीषाको मात्र होइन, उनका श्रीमान् सम्राट, बुबा प्रकास एवं पारिवारिक फोन पनि लगातार बज्न थाले । एक घन्टामै मनीषामाथि यति ठूलो दबाब आयो कि उनी फेसबुकको उक्त स्टेटस मेटाउन बाध्य भइन् । फेसबुक स्टेटस मेटिए पनि उनको निर्णयलाई साथ दिने वा त्यसो नगर्न सम्झाउनेहरूको कथा भने फेसबुकभरि छरिरह्यो । त्यसमध्ये एक जनाले मनीषालाई सम्झाउँदै लेखे, ‘पहिलो केही महिना केही कुरा नराम्रा लाग्छन् । किनभने त्यसमा हाम्रो बानी परिसकेको हुँदैन । वैवाहिक जीवन पनि त्यस्तै हो ।’ तर केहीले मनीषाले आवेगमा इन्टरनेटमा राखेको पीडालाई साथ दिँदै लेखे, ‘यदि तिमीले छोडपत्र गर्ने निर्णय गरि नै सक्यौ भने ठिकै छ, हामी तिम्रो साथमा छौं ।’
कुनै चलचित्रको क्लाइमेक्सजस्तो मनीषाको यो कमेन्ट आउनुअघि बजारमा मनीषा गर्भवती भएको खबर छाएको थियो । उनी हँसिलो मुद्रामा विभिन्न सार्वजनिक कायर् क्रममा सरिक भैरहेकी थिइन् । उनी नेपाली चलचित्र धर्मा एवं एउटा स्याटलाइट च्यानलको विज्ञापनको प्रचारमा व्यस्त थिइन् । विवाहपछि थोरै समयका लागि मात्र उनी मुम्बई गएकी थिइन् । आफ्ना रहल-पहल काम सकेर तुरुन्तै फर्किएकी मनीषाको जोडीले नवविवाहिताको कुनै पनि धर्म तोडेको थिएन । दसैंअघिसम्म सम्राट र मनीषा एउटै गाडीबाट बुढानिलकण्ठस्थित घरबाट सहर आउँथे । सहर आएपछि मात्र उनीहरू आ-आफ्नो काममा लाग्थे । कार्यक्रम भएको दिन मनीषा सीधै कार्यक्रमह रूमा पुग्थिन् भने नभएको दिन माइतीमा बस्थिन् । साँझ उनीहरूसँगै बुढानीलकण्ठ र्फकन्थे । पारिवारिक स्रोतका अनुसार कहलेकाहीँ भने सम्राट पनि ससुरालीमै रात बिताउँथे ।
दसैंपछि भने उनीहरूमा केही समस्या आउन थालेको पारिवारिक सूत्रहरूले दाबी गरेका छन् । ‘हरेक घरमा श्रीमान्-श्रीमतीबीच असमझदारी हुनु कुनै नौलो कुरा हो इन ।’ परिवारका स्रोतले भन्यो, ‘अहिलेको समस्या त्यस्तै केही हुन सक्छ । अहिले सबै ठीक भैसकेको छ । यो तपाईंहरूले समाचार बनाउने विषय नै होइन ।’ मनीषा आफैंमा संसार खाएकी महिला हुन् । पारिवारिक सदस्यहरूले यसलाई साधारण समस्या बताए पनि मनीषा आफैंले भने फेसबुकमा आफ्नो पारिवारिक समस्या धरापमा परेको अवस्थालाई अहिले पनि अस्वीकार गरेकी छैनन् । चर्चित भारतीय पोर्टल बलिउडएक्ट्रेस डट कमसँग मनीषाले भनेकी छन्, ‘त्यसबेला म साह्रै रिसाएकी थिएँ । त्यसै को प्रतिक्रियास्वरूप मैले उक्त स्टेटस पोस्ट गरेकी हुँ । किनभने म रिसाएका बेला यस्तै सिल्ली काम गर्छु ।’ मुम्बईस्थित उनका साथीहरूले पनि मनीषा भावुक स्वभावकी भएकाले उनले मनको आवेग थेग्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । साथीभाइहरूले समेत मनीषाको फेसबुक स्टाटसपछि उनीहरूको पारिवारिक जीवनको चिन्ता गरेका छन् । फिनल्यान्डमा उनीहरूको एकमहिने हनिमुन यात्राको तस्बिर प्रकाशित गरेको त्यहाँको सबैभन्दा बढी बिक्री हुने पत्रिका हेलसिन्की दैनिकका तस्बिरहरू मनीषाको नयाँ खबरसँगै फेरि एकपटक इन्टरनेट भरी छरिएका छन् ।
अहिलेको अवस्था के छ ?
गत शुक्रबार फेसबुकमा आफ्नो वैवाहिक जीवनमा समस्यामा परेको स्टाटस मेटाए पनि उनीहरूको पारिवारिक समस्यामा भने सुधार नआएको उनीहरूको व्यवहारले दे खाएको छ । दसैंमा माइती आएपछि मनीषा बुढानीलकण्ठस्थित आफ्नो घरमा एकपटक मात्र पुगेकी थिइन् । ‘माइतीमा बस्नु नराम्रो होइन, तर र्फकंदा उनले बुढानीलकण्ठमा भएका आफ्ना सबैजसो सामग्री माइतीमा ल्याएकी थिइन् ।’ पारिवारिक स्रोतले साप्ताहिकसँग भन्यो, ‘सबै सामग्रीसहित माइती आउनुचाहिँ केही असजिलो दृश्य थियो ।’ त्यसबेला उनका नजिकका आफन्तले उनी लामो समय माइतीमै बस्ने हिसाबले आएको अनुमान गरेका थिए ।
तिहारअघि सम्राट फोहोर व्यवस्थापनको एउटा गोष्ठीमा भाग लिन टर्की गएका थिए । त्यसबेला मनीषाले श्रीमान् लामो समय बाहिर बस्ने भएकाले तयारीसहित माइती आएको बताएकी थिइन् । यद्यपि श्रीमान् सम्राट भाइटीकाको दिन नेपाल फर्किए पनि उनले माइती छाडिनन् । बरु सम्राट नै कतिपय अवस्थामा ससुराली एवं आफ्नो महाराजगन्जस्थित घरमा बसेका थिए । लामो समय मनीषा बुढानीलकण्ठस्थित घर नफर्कंदा नै बजारमा मनीषाको मन फेरिसकेको अनुमान गरिएको थियो । यद्यपि पत्रकारहरूको प्रश्नमा उनले भनेकी थिइन्, ‘म विराटनगरमा जन्मिएँ, बनारसमा पढें अनि मुम्बईमा करियर बनाएँ । मेरो अधिकांश समय गर्मी स्थानमा बितेकाले मलाई जाडोमा समस्या पर्छ ।’ मनीषाले बुढानीलकण्ठस्थित घरमा अत्यधिक चिसो भएकाले आफू माइती सरेको र पारिवारिक जीवन सहज रहेको बताएकी छिन् ।
बजारभरि आफ्नो पारिवारिक जीवन धरापमा परेको हल्ला चलेपछि मनीषा भने अचानक मुम्बई उडेकी छिन् । केही समयअघि मुम्बईस्थित फ्लाट बिक्री गरेर सधैंका लागि नेपाल बस्ने योजना बनाएकी मनीषाले उक्त फ्लाट नबेच्ने योजना रहेको मुम्बईस्थित साप्ताहिक पत्रिका विन्दाज न्यूजले लेखेको छ । मनीषा मुम्बई पुगेपछि त्यहाँका स-साना सञ्चारमाध्यमहरूले मनीषाको विवाहलाई गसिप बनाउन थालेका छन् । उनका समाचारहरू जुम, इटिसी, बलिउड बिजनेस एवं स्थानीय न्यूज च्यानलमा पनि प्रसारण हुन थालेका छन् । यद्यपि आफ्नो पारिवारिक अवस्था सहज भएको मनीषा र सम्राटले बताएका छन् । सकेसम्म सञ्चारमाध्यमका अगाडि मुख खोल्न नचाहने सम्राटसँग साप्ताहिकले दुई दिनसम्म लगातार सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेको थियो । लामो प्रयासपछि मंगलबार राति सम्पर्कमा आएका सम्राटले सञ्चारमाध्यमको व्यवहारले आफूलाई अप्ठयारोमा पारेको प्रतिक्रिया दिए । ‘डिभोर्स एवं पारिवारिक खटपटका कुरा भारतीय मनोरञ्जन साइट एवं च्यानलहरूले चलाएका हल्ला हुन् ।’ सम्राटले भने, ‘ त्यस्तो केही छैन । एक दिन राम्रोसँग कुरा गरौंला, अहिले म एउटा विवाहको भोजमा छु ।’
सम्राट निकट व्यक्तिहरूका अनुसार मनीषा मुम्बई जाँदा उनलाई छाड्न सम्राट एयरपोर्ट गएका थिए । दुवैको अनुहारमा त्यस्तो कुनै तनाव थिएन, जुन यति धेरै हल्लाका बीच हुनुपथ्र्याे । ‘तपाईंका लागि यो गसिप रमाइलो समाचार बन्ला, तर सत्य के हो भने दुवै परिवारमा त्यस्तो कुनै समस्या छैन ।’ सम्राट र मनीषाको विवाहमा मुख्य भूमिका खेलेका एक जना नातेदारले भने, ‘नराम्रो भएको भए सम्राट मनीषालाई छोड्न एयरपोर्ट किन जाने ? किन भविष्यको योजना बनाउने ? तपाईंहरू हावामा तीर हानिरहनुभएको छ ।’
यद्यपि उनले पनि मनीषाको फेसबुक स्टाटस र पछिल्ला घटनाक्रममा केही सत्यता रहेको संकेत गरे । ‘पारिवारिक जीवनमा केही तलमाथि त परि नै हाल्छ, तर डिभोर्स नै हुने अवस्थाचाहिँ होइन ।’ ती सदस्यले भने, ‘सानातिना समस्या हुन् भने पनि केही दिनपछि ठिक हुन्छ ।’ पछिल्लो समयमा मनीषासँग सम्बन्धित भएर आएका खबरले उनीहरूबीचको समन्ध क्रमशः सामान्य हुँदै गएको देखाएको छ । यद्यपि त्यस्तो कुन कुरा थियो, जसले अचानक मनीषा डिभोर्स गर्ने मानसिकतामा पुगेर सार्वजनिक गरिन् ? योचाहिँ मनीषा र सम्राटले अहिलेसम्म कसैसँग बताएका छैनन् । मनीषा र सम्राटको पाँचमहिने दाम्पत्य जीवनमा आएको यो भुइँचालोको प्रसङ्ग भने दुवैले यसरी लुकाए, जुन सम्राट र मनीषाको गर्भमै रहन पुग्यो ।
मनीषाले फेसबुकमा पोखेको एउटा मार्मिक कथन
समय सधैं अहिलेको जस्तै हुन्छ जस्तो लाग्छ… अरूको पनि मेरो जस्तै होला भन्ने ठान्छु । म अरूको पीडा बुझ्न सक्छु, तर म अफैंलाई सोध्छु— के म आफ्नो पीडा बिर्सिऊँ ???? जब हामी वास्तविक प्रेम पाउँछौं तब खुसी, सुख पनि साथै पाइरहन्छौं भने दुःख र पीडा पनि त्यसको साथै हुन्छ । मैले पनि प्रेम र सम्मानको धरातलमा हिँडेर स्वर्गीय आनन्द पाउन चाहें…।मेरो जीवनलाई सूक्ष्म रूपमा हेर्ने हो भने के मैले राम्रोका लागि सम्झौता गरेको हो ? यदि त्यो समय अहिले हुने हो र अहिलेको समय त्यो दिन हुने हो भने घरमा प्रे मको पूजा गर्न सकिन्थ्यो । प्रेममा कहिल्यै सम्झौता नगर… तिमी सधैं राम्रो पाउनलाई योग्य छौं ।
Posted by agnibana on नोभेम्बर 27, 2010 in Uncategorized
← यसरी मारे माओवादीले मुक्तिलाई	नेपालसम्बन्धी अमेरिकी दूतावासको हजारौँ गोप्य कागजात सार्वजनिक हुँदै →	One response to “मनीषाको दाम्पत्य जीवन धरापमा ?”	neeta	नोभेम्बर 27, 2010 at 7:33 बिहान	baibahik jiban yastai ho manisa ji dubaiko samjhautama baneko yo jiban bachaune kosis garnus